I-Secreto Garden, i-air conditioning, i-wifi
I-Casita Jardin Secreto, isiphephelo edolobheni elincane laseCorralejo, eduze kwazo zonke izinsiza nazo zonke izindawo zokuphumula, kodwa ivikelwe enkathazo.
Lapha kubusa ukuthula nokuthula, ukuphumula nokunethezeka, kuvikelwe emoyeni, ngaphansi kwelanga eliduduzayo. Indawo yokuthula, endaweni eluhlaza enokubukwa okuhle okungavinjelwe kolwandle.
I-Casita Jardin Secreto iyingxenye yesakhiwo esinezindlu zasedolobheni ezintathu ezinhle.
Futhi kubizwa iCasitas, le townhouses amathathu atshela ichibi Jacuzzi ne beach futhi ezine lounge izihlalo ke esitezi sokuqala, a-panoramic ophahleni ithala endaweni eshaweni, ezimbili lounge izihlalo kanye nezinye izikhungo zokuzilibazisa, ukujabulela ilanga, usuku lonke.
Casita Jardin Secreto has ahlukene izikhala ezimbili ongaphandle, i-eningizimu-mpumalanga ebheke ithala ukufinyelela egumbini lokuphumula futhi ekhishini, futhi ube insimu enhle ebiyelwe, kufinyeleleke kusukela ekamelweni, kuba enyakatho-ntshonalanga ebheke phambili, ebusweni, ekahle ukuthatha siesta... ukuphumula kuqinisekisiwe. I-Casita Jardin Secreto ilungele iholide lothando nothando.
Lapha ungenza yonke into ngezinyawo, ulwandle luqhele ngamamitha angama-200, izitolo nezindawo zokudlela ziqhele ngamamitha ayi-150.
Sizithanda izingane kakhulu... kodwa ukuze sikuqinisekise ukuthula okuphelele kwengqondo, le ndawo igcinelwe abantu abangaphezu kweminyaka engu-16 ubudala.
4.96 ·83 okushiwo abanye
4.96 · 83 okushiwo abanye
Le ndawo itholakala eCorralejo playa, endaweni ehlala abantu abaningi, emgwaqweni owodwa obheke olwandle, 200 m ukusuka ogwini kanye 100 m ukusuka ezitolo; uzungezwe izihlahla ezinkulu, ukuhlabelela kwezinyoni kuzokuphelezela emini. Ukupaka okulula kwemoto yakho emgwaqeni noma eduzane mahhala
Ivillage engumakhelwane iyikhaya lami lesibili, ngizokwamukela uma ngikhona, ngingekho, umuntu engimethembayo uzongena esikhundleni sami. Amathuba futhi okubuyisela okhiye bakho ebhokisini Lekhodi.